လူထုရဲ့ စု People’s Suu | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » လူထုရဲ့ စု People’s Suu
လူထုရဲ့ စု People’s Suu
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 30, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Myanma News |6comments
ခရီးထွက်မယ် - ကာတွန်းစောငို မိုးမခ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာပြည်အနှံ့ နိုင်ငံရေးခရီး ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ တနင်္လာနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပြီး အဲဒီခရီးစဉ်ဟာ ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုနဲ့ သူမရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို လွတ်မြောက်ပြီး ၆လအကြာမှာ စမ်းသပ်တာဖြစ်နိုင်သည်။ ဟောင်ကောင်မှာလုပ်တဲ့ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တခုမှာ မေးမြန်းစဉ် အခုလို အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်သည်။ ‘ဂျွန်လထဲမှာ ခရီးထွက်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်’ လို့ ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ စုဝေးပွဲတခုကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ တတ်သိပညာရှင် တထောင်ကျော်ကို ရိုးရာအမျိုးသမီးဝတ်စုံ ဆင်မြန်းထားတဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်မှ ပြောသည်။
‘ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး၊ ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို စီစဉ်နေဆဲလို့’ စစ်တပ် အာဏာတည်မြဲဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် အများပြစ်တင်ခြင်းခံနေရတဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲအပြီး တပတ်မပြည့်ခင် လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ ဒေါ်စုကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကို ဒေါ်စုခရီးထွက်တိုင်း စစ်အာဏာပိုင်များ၏ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုအကြိမ်တွင်လည်း စစ်အာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေး အာမခံချက် ပေးမထားကြောင်းနှင့် နိုင်ငံသားတိုင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်မှာ အစိုးရတရပ်၏တာဝန် ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားသော စစ်သွေးကြလူမိုက်များဖြင့် ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ဒေါ်စုနှင့်အဖွဲ့ ယာဉ်တန်းကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သူမနှင့်နောက်လိုက်အများပြားကို ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဒေါ်စုသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း၂၀အတွင်းအချိန်အများစုကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ကုန်လွန်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ် အချုပ်အနှောင်ခံရမှုမှာ တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရက ၂၀၀၃ခုနှစ် ဒီပဲရင်းလူသတ်ပွဲအတွင်း လူလေးဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်သော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမူ လူတရာနီးပါး သေဆုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ယခုခရီးစဉ်သည် ဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေးမှ ဖယ်ထုတ်ရန် စီမံထားသော ရွေးကောက်ပွဲအပြီး သူမအပေါ် လူထုထောက်ခံမှုကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင်များ၏ ဟန့်တားနှောက်ယှက်မှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အခုလို ကြိုးပမ်းမှုဟာ သူမရဲ့နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက် ပျော့ပြောင်းနေမှုအပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေနပ်စေမည်ဖြစ်သည်။ သူမကို ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်နိုင်အောင် တားဆီးပိတ်ပင် ထားပြီး လွှတ်တော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ရှိမည်မဟုတ်ဆိုကာ အန်အယ်ဒီပါတီသည် နိုဝင်ဘာလ ရွေးဂေါက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သဖြင့် ပါတီရပ်တည်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း ခံထားရသည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် ဒေါ်စုကို ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးခဲ့စဉ် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်နေသော ထောက်ခံသူ လူထောင်ပေါင်းများစွာ စုရုံးရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
တရုပ်နိုင်ငံအပေါ် သဘောထား၊ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လျူရှောင်ဘိုနှင့် သေဆုံးသူ အယ်ကေးဒါး ခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင် စသည့်အကြောင်းအရာများ အပါအဝင် ကိစ္စရပ်အတော်များများကို မိနစ်၉၀ကြာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင် မှတ်ချတ်ပြု ပြောဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရအား နိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှု ပိုမိုရှိရန် ပြောဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရသည် ဖေဖော်ရီလမှစ၍ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ဖန်တီးမှုအနုပညာရှင် Ai Wei Wei အပါအဝင် ရှေ့နေ၊ လှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီးဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးသော နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
‘တရုတ်ပြည်ဟာ ကြီးမားတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတခုပါ၊ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ကြီးမြတ်အောင်မြင်တဲ့ လူမျိုးတွေပါလို့’ ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမကဆက်လက်ပြီး ‘ရှင်တို့ဟာ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီး အမျှော်အမြင်ရှိကြ ပါတယ်၊ ရှင်တို့တတွေဟာ အတွေးအမြင်ပေါင်းစုံကို ရှင်သန်ကြီးထွားခွင့်ပြုဖို့ တတ်နိုင်ကြသူတွေပါလို့ (မြောက်ပင့်ပြောဆိုခဲ့သည်… အဲအဲ.. မှားသွားလို့) ချီးမွှမ်းပြောဆိုခဲ့သည်။ (တရုတ်မလေးများဟာ ချောမော လှပကြပြီး စိတ်သဘောထားကောင်းသူများ ဖြစ်သည်။ တရုတ်ထီးများကတော့ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာ၊ ဘီလူးသရဲ သဏ္ဍာန်ရှိသူ အောင်ကျားကြူများ ဖြစ်သည်၊ ဤကား ဘာသာပြန်သူ ကြောင်ကြီး၏ စကားချပ် :P)
ဒေါ်စုက အပြောင်းအလဲကို ဆန့်ကျင်ကြတာ အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာဖရိကမြောက်ပိုင်းက အာဏာရှင်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင် ပြောင်းလဲမှုဟာ ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့မှာ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ လျူရှောင်ဘိုနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ခေါင်းဆောင်ဒေါ်စုက သူမအနေနဲ့ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရပြီး လျူအပါအဝင် အခြား အကျဉ်းချခံ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား တက်ကြွသူများကို မိမိတို၏ ယုံကြည်ချက်ကို စွဲကိုင်ထားဖို့ အားပေးတိုက်တွန်း လိုက်သည်။ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင် သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကြမ်းဖက်မှုလမ်းစဉ်ဆိုတာ အကြမ်းဖက် အနိဌာရုံနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရသည်ဟု ဖြေသည်။
Suu Kyi plans landmark Myanmar political tour by Beh Lih Yi
HONG KONG (AFP) – Democracy icon Aung San Suu Kyi said Monday she is planningapolitical tour of Myanmar,amove likely to measure her popularity and test the limits of her freedom after her release six months ago.
Suu Kyi, who spent seven years in detention until last November, was asked atavideoconference in Hong Kong to confirm reports she will launch political rallies across the nation, her first since her freedom.
“I hope to travel… in the month of June,” the Nobel Peace Prize winner, clad inabeige traditional top, told more than 1,000 academics, students and members of the public gathered at the University of Hong Kong.
“Where I will be going I can’t tell you yet. We are trying to work out the itinerary,” said Suu Kyi, who was freed less thanaweek afterawidely criticised poll that cemented the military regime’s decades-long grip on power.
Suu Kyi’s travels around the country have landed her in trouble with the Myanmar authorities several times in the past, and the 65-year-old said she had not been given any security guarantees for the trip.
“I have not been given any safety assurance,” she said, but added that it was the “duty of the government” to protect every Myanmar citizen.
Suu Kyi’s most recent stint in detention came after her convoy was attacked byajunta-backed militia in 2003 in an ambush apparently organised byaregime frightened by her popularity.
She was arrested along with many party activists and later moved back to her Yangon home — where she had spent most of the past two decades in detention — and placed under house arrest forathird time.
The tour will beatest of both Suu Kyi’s popularity following an election that has left her sidelined from politics, and of her freedom to travel around the country unhindered by the authorities.
The move is likely to go down well with her supporters, some of whom have been frustrated over slow political change in the reclusive nation since her release six months ago.
Suu Kyi’s party was disbanded for opting to boycott the November vote because the rules seemed designed to bar her from participating, and it has no voice in the new parliament.
Thousands of exuberant supporters greeted her in Yangon after she was freed in November, when officials said there were no conditions attached to her release.
During the lively 90-minute session, Suu Kyi also commented onawide range of topics including her view on China, the jailing of fellow Nobel peace laureate Liu Xiaobo and Al-Qaeda leader Osama bin Laden’s death.
On China, Suu Kyi called for greater openness in the country, which has launched its harshest crackdown on dissents in years since February, arresting scores of lawyers and activists, including prominent artist Ai Weiwei.
“China isagreat country, the Chinese people are great people,” said Suu Kyi, adding “you can afford to be daring; you can afford room to allow for all kinds of opinions”.
Suu Kyi said resistance to change was “not surprising”, but pointed out that change was happening all over the world, including the unrest that has swept the Middle East and north Africa, toppling some authoritarian regimes.
On Liu, who remains inaChinese prison, the Myanmar politician — who said she was “uncomfortable” being branded asademocracy icon — urged him and other imprisoned political activists to “keep faith with yourself”.
Asked about the recent killing of terror kingpin bin Laden, Suu Kyi — who has beenalong-time advocate of non-violent struggle — said: “It just shows violence ends with violence.”
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း အခုမှ သဘောပေါက်တော့တယ်… ကိုကြောင်ကြီး ကြိတ်ခိုက်နေတာ တရုတ်မလေးကိုး
တရုပ် မလေးက သဘောပေါက် သွားပြီတဲ့ ဗျို့ ။
ကွန်ကရက်ကျူးလေးရှင်း ပါ ကို Bigcat ရေ။
ဒီက တရုပ်မ မဟုတ်ဘူး နှစ်ရုပ်မ … နှစ်ရုပ်မရဲ့ အသားရည်များ လှသလား မမေးနဲ့ချောကလက်ရောင် 20% ကို မဟူရာရောင်လေး 80 %လောက်သန်းနေတာ …
နေ့ခင်းဘက်ဆို နေခြောက်လှန်းပြီး ညဘက်ဆို ကတ္တရာစေး မိတ်ကပ်လိမ်း အိပ်လို့ ဒီလို ပိတုန်းရောင် အသားရေကို ပိုင်ဆိုင်နေတာပါ … ။
ဒါဆို ဒေါ်စုခရီးသွားနေသည် စီးရီးထွက်အုံးမှာပေါ့